महिलाले पुरस्कार पाउन अरु कति वर्ष कुर्नु पर्ने हो ? « Loktantrapost
महिलाले पुरस्कार पाउन अरु कति वर्ष कुर्नु पर्ने हो ?
१७ चैत्र २०७४, शनिबार १४:१५
झापामा महिलाको नाममा स्थापना भएका पुरस्कार तथा सम्मानहरु औँलामा गन्न सकिने सङ्ख्यामा छन् । यति मात्र होइन, महिलाले नै पाउने भनी किटान गरिएका पुरस्कारहरुको झन् खडेरी नै छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र शर्मा परिवारले प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी एसएल शर्मा र उहाँकी पत्नी पार्वतीदेवी शर्माको स्मृतिमा पुरस्कार स्थापना गरेकोमा हामी सबैले धन्यवाद दिनु पर्छ । खासगरी पार्वतीदेवी पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार नेपालमै अद्वितीय बन्न पुगेको छ । यो पुरस्कार झापाली पत्रकारका लागि गौरव र प्रेरणाको स्रोत पनि हो ।
बधाइ छ मेनुका भण्डारी र विष्णु सुब्बालाई । उहाँहरु प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी एसएल शर्मा र उहाँकी पत्नी पार्वतीदेवी शर्माको स्मृतिमा स्थापित गरिमामय पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनु भयो । विष्णु सुब्बाजीलाई धेरैले चिनेका छन् । तर यहाँ उपस्थित थोरै महानुभावहरुलाई मात्र थाहा होला कि पार्वतीदेवी पत्रकारिता प्रोत्साहनबाट पुरस्कृत मीना भण्डारी मेरी बहिनी हो भनेर । हामी इलामको तोभाङमा जन्मियौँ एउटै घरमा र हुर्कियौँ एउटै घरमा । हामीले पढेका स्कुलहरु एउटै थिए, हामीले पानी पिएका कुवा र हिँडेका गोरेटाहरु एउटै थिए । तर जब हामी विहे भएर जुन जुन घरमा गयौँ । संयोगले ती दुबै घरहरु पत्रकारितासँग जोडिएका थिए । यसर्थ हामी दुबै जना भाग्यमानी भयौँ ।
चाडपर्व र व्यक्तिगत कारणले हामी दिदीबहिनी धेरैपटक भेटघाटमा जुटेका हुन्छौँ । तर आज त्यो भन्दा फरक प्रसङ्गमा, पत्रकारिताको एउटा महायज्ञमा हामी दुबैलाई एकैचोटी उभिने अवसर प्राप्त भयो । यसका लागि पत्रकार महासङ्घप्रति आभारी छु । बहिनी मीना सम्मानको पात्र भएकी हुन् । बहिनी मीनाले पुरस्कार पाउँदा आज म अति हर्षित भएकी छु ।
प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्की कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले हाम्रा लागि समय दिनु भएको थियो । मन्त्रीलाई हाम्रा कुरा सुनाउने र उहाँले हाम्रा कुरा सुन्ने यो राम्रो अवसर थियो । मैले यस्तो मौकामा महिलाका बारेमा अलिकति प्रसङ्ग उठान गर्ने मौका पाएँ ।
एउटा समय देख्यौँ हामीले, महिला मन्त्रालय नै पुरुषले चलाउँथे । अर्को समय पनि भोग्यौँ हामीले, सुत्केरी भत्ता पनि पुरुषहरुले नै लिए । तर अब समय बदलिएको छ भने यो देशको सरकारले र यहाँका मन्त्रीले अब महिलाहरुमाथि बर्षौदेखि राज्यबाट हुँदै आएको थिचोमिचोको हर्जाना तिर्ने बेला आएको छ । प्रदेश नं.१ महिला मुद्धामा, महिलामैत्री समाज निर्माणमा सबैभन्दा अब्बल सावित हुन सकोस् शुभकामना ।
माननीय मन्त्रीज्यु यही झापा जिल्लावासी भएकाले उहाँसँग हामी जिल्लाबासी पत्रकारहरुको अलि बढी अपेक्षाहरु हुन्छन् नै । धेरै कामहरु गरिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन । केही थोरै यस्ता कामहरु गर्नुहोस् मन्त्रीज्यू, ताकि तपाइँहरुलाई आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेका महिला शक्तिले धन्यबाद दिउन् । प्रदेशमा हेर्यो भने मुख्यमन्त्री पुरुष, मन्त्रीहरु सबै पुरुष हुनुहुन्छ । के महिलालाई मन्त्री नबनाई हाम्रो प्रदेश समृद्ध र समावेशी होला ? मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकारहरु नियुक्ति हुन बाँकी नै छन् । मेरो सानो सुझाव के छ भने सल्लाहकारमा महिलाहरुलाई पनि कमसेकम समेट्नुहोस् । राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश र सभामुख बन्न योग्यता पुग्ने महिलाहरु मन्त्रीका सल्लाहकार बन्न अयोग्य होलान् त ?
अर्को कुरा, प्रदेश नं. १ मा पत्रकार महिलाले मात्र पाउने गरी एउटा उच्च राशीको पुरस्कार सरकारी तहबाटै स्थापना गरियोस् । पत्रकार महिलाका लागि लेखनवृत्ति पुरस्कार स्थापना गरियोस् । त्यसका लागि प्रदेशको पत्रकार महासङ्घसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । म यो किन भनिरहेकी छु भने प्रदेश नं.१ प्रथम महिला राष्ट्रपति जन्माउने प्रदेश हो । अरु प्रदेशलाई सिकाउने गरी हामीले काम गर्नै पर्दछ ।
अहिले झापाकी एउटी सहकर्मी पत्रकार सुभद्रा अधिकारी भरतपुर क्यान्सर हस्पिटलमा केमो पर्खिरहनु भएको छ । अर्की सहकर्मी माया पकुवालले भक्तपुर हस्पिटलमा किड्नीको भर्खरै प्रत्यारोपण गर्नु भएको छ । अग्रज पत्रकार नकुल काजी र अमृतलाल श्रेष्ठ विरामी हुनुहुन्छ । पत्रकारहरुले जति काम गर्छन्, त्यस अनुसारको दाम पाउँदैनन् भन्ने त सबैलाई थाहै छ ।
यस्तो बेलामा मेरा शब्दहरु अलिकति कठोर पनि हुन सक्छन्, त्यसका लागि म अग्रिम क्षमा चाहन्छु । आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो परिवारको स्वार्थलाई विर्सेर यो देशलाई समृद्ध र सुखी बनाउन दीर्घसेवा गर्नु हुने पत्रकारहरुप्रति, उहाँहरुको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति यो राज्य अलिकति पनि जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । के सबै सुविधा र उपचार राजनीति गरेकाहरुले मात्र पाउनु पर्ने हो ? म आग्रह गर्न गर्छु–गम्भीर रोग लागेका पत्रकारहरुको उपचारको सम्पूर्ण खर्च प्रदेशको सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था होस् । र, यो महान कार्यको घोषणा र थालनी माननीय हिक्मत कार्कीज्युकै अग्रसरतामा होस् ।
केही साथीहरुको नाम यहाँ सम्मानका साथ लिन चाहन्छु । भीमा शिवाकोटी कञ्चनजङ्घा एफएमकी खम्बा । शुशिला सङ्ग्रौला न्यू मेची टाइम्स दैनिककी सम्पादक । लीला अनमोल रेडियो विराटकी प्रबन्ध निर्देशक । प्रतिभाका हिसाबले कम छैनन् सावित्रा दाहाल, इन्दु पूर्वेली, विष्णु मैनाली, भूमिका सुब्बा, शुष्मा राजबंशी, गङ्गा बराल, रेजिना रोदन, लीला राई, माया पकुवाल, मनिषा चम्लागाइँ र अरु साथीहरु । क्षमताको होइन, प्रोत्साहनको कमी छ उहाँहरुलाई ।
पत्रकार महासङ्घ झापाको नेतृत्व र एसएल शर्माको स्मृतिमा पुरस्कारको स्थापना गरिदिनु हुने दाता परिवारमा मेरो एउटा प्रश्न छ–अघि मैले उच्चारण गरेका जस्ता सिर्जनशील पत्रकार महिलाहरुले एसएल शर्माको स्मृतिमा स्थापित पुरस्कार पाउन अरु कति वर्ष कुर्नु पर्ने हो ? महिलाले नपाउने भनेर विधानमा लेख्नु भएको त छैन होला नि ? सवाल आजको पुरस्कारप्रति मात्र लक्षित होइन । सवाल पुरुषले पुरस्कार पाउनै हुँदैन भन्ने पनि होइन । अनेक चुनौतिको सामना गर्दै पत्रकारिता गरिरहेका महिलाहरुलाई पत्रकार महासङ्घले न्याय गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय आजको मुख्य प्रश्न हो । आशा गर्दछु–आउँदो बर्ष झापाली पत्रकारिताको इतिहासमा महिलाहरुले गर्व गर्नलायक वर्ष बन्ने छ, बनाइने छ ।
अर्कातर्फ पार्वतीदेवी पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार हरेक वर्ष महिलाले पाउँदै आउनु भएको छ । एउटी महिलाले पुरस्कार पाउनु साह्रै राम्रो हो । पत्रकारितामा लाग्न प्रोत्साहन गरेवापत पत्रकार पत्नीलाई त्यो पुरस्कार दिइने गरिन्छ । पत्रकारितामा महिलाहरु पनि पुरुषसरह डटेर लागिरहेका छन् । ती महिलालाई पत्रकारितामा लाग्न प्रोत्साहन उनीहरुका पतिहरुले अवश्य दिएका छन् । यो पुरस्कारलाई त्यतातिर पनि मोड्न सके राम्रो हुन्थ्यो । पत्रकारितामा लाग्न विवाहित महिलालाई त्यति सहज छैन । यदि सहज छ भने त्यसमा उनीहरुका पतिको भूमिका सम्मानयोग्य छ ।
एसएल शर्माको स्मृतिमा स्थापित पुरस्कार नेपाल पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवसको अवसर पारेर हरेक वर्ष वितरण हुने गरेको छ ।
यस वर्षको कार्यक्रम शानदार र व्यवस्थित पनि भएको थियो । वक्ताहरु थोरै थिए । प्रमुख अतिथि हिक्मत कार्कीले पत्रकारिताका विषयलाई समेटेर सारगर्वित मन्तब्य व्यक्त गर्नु भएको थियो । पत्रकार महासङ्घका पूर्व महासचिव चन्द्र भण्डारी, वत्र्तमान केन्द्रीय सदस्य उद्धव तिम्सिना, पुरस्कारका संरक्षक राजेन्द्र शलभ लगायतको शुभकामना मन्तब्य महत्वपूर्ण थियो । भीमा शिवाकोटी र गिरिराजमणि भट्टराईले पुरस्कृत प्रतिभाहरुको परिचय सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । समग्रमा कार्यक्रम सफल, सभ्य र भव्य भएको थियो ।